Dအစိုးရ မကောင်းဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Dအစိုးရ မကောင်းဘူး
“ကိုယ်တွေက အပုပ်နံ့ ခံရလွန်းလို့ အသားကျနေပြီ”
ကိုယ်တွေရဲ့ နေသားတကျ လူနေမှုဘဝကလေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ရက်တယ်ဗျာ။
ကိုယ်တွေက လမ်းဘေးမှာ တဲထိုးပြီး ကျူးကျော်အဖြစ်နဲ့ နေသားကျနေပြီ။ ဒါကို စာရင်းတွေကောက်ပြီး အိမ်တွေယာတွေ စီစဉ်ပေးဖို့လုပ်တယ်။
ဒီလို လမ်းဘေးမှာ အသားတကျနေ နေကြတာကို မကျေနပ်လည်း အရင်အစိုးရလို ဘော်ဒူဇာနဲ့လာထိုးပါတော့လား။
အခုတော့. . .ဗျာ။
သူတို့လုပ်တာနဲ့ပဲ လမ်းဘေးမှာ သာသာယာယာနေနေတဲ့ကျူးကျော်တွေ အိမ်နဲ့ယာနဲ့ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။
ကိုယ်တွေက ကွမ်းတံတွေးတွေ တပျစ်ပျစ် ထွေးထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်ရတာ နေသားကျနေပြီ။
တစ်ခါတစ်ခါဆို ကားပေါ်ကနေ ဗျစ်ခနဲထွေးချသွားတဲ့ ကွမ်းတံတွေး- ထွေးသူတွေကြောင့် စိတ်တိုကြ ဒေါသထွက်ကြ ရန်တွေ ဖြစ်လိုက်ကြနဲ့ ဘယ်လောက် ပျော်စရာ ကောင်းတုန်း။
ဒါကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနဲ့ ကွမ်းတံတွေးတောင် ဖြောင့်အောင် မထွေးရဲအောင်(အထွေးမခံရအောင်)လာကြပ်တယ်။
သူတို့လုပ်တာနဲ့ပဲ မြို့က နီနီလေးနဲ့လှတဲ့ ကွမ်းတံတွေးအရောင်တွေ လျော့ကုန်ပြီး သန့်ရှင်းလာတော့မယ်။
ကိုယ်တွေက အမှိုက်ဆို ဘက်ခနဲ တွေ့ကရာ ပစ်ချတတ်တာ။ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဘယ်လောက် လွယ်လိုက်သလဲ။ ဟောဒီမှာ အမှိုက်! ကဲကွာ ဝှစ် !ဘက်!
ကိုင်း အလုပ်ရှုပ် မသက်သာပေဘူးလား?
အမှိုက်သိမ်းဖို့ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ် အားယားနေမှာစိုးလို့
”သိမ်းစမ်း ငါတို့အမှိုက်”ဆိုပြီး အလုပ်ပေးထားရာတောင် ရောက်သေး။
ဒီလို အသားကျနေတာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က လုပ်တယ်။ အိုကြီးအိုမနဲ့ ဟို ၇ဝကျော် လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးက စပြီး အမှိုက်ထွက်ကောက်ပြတယ်။
သူတို့လုပ်တာနဲ့ပဲ ညစ်ပတ်နေတဲ့မြို့ကနေ သန့်လာတော့မယ်။
ကိုယ်တွေက မြို့မှာ နေတာကြာပြီ။ပလက်ဖောင်းဆိုတာ လူသွားဖို့ လုပ်ထားတာ မဟုတ်! ဈေးသည်တွေ ဈေးတက်ရောင်းဖို့ လုပ်ထားတာဆိုတဲ့အသိနဲ့ အသားကျနေပြီ။
ပလက်ဖောင်းတွေပေါ် ကိုယ်တွေ လျှောက်မရအောင် ဈေးသည်တွေက တန်းစီ ရောင်း!
ကိုယ်တွေက ကားလမ်းပေါ် ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်! ကားတွေက လမ်းပေါ်မှာ ဒီလိုပဲ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းသွားးး
ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောင်းတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေကို ဈေးတန်းကြီးလုပ်ပေးတယ်။
ဆိုးလိုက်တာ။ ဈေးတန်းကြီးကတော့ စည်လို့ကားလို့။ ကိုယ်တွေမှာဖြင့် အရင်က တက်မလျှောက်ရတဲ့ ပလက်ဖောင်းကို ချောင်ချောင်ချိချိကြီး တက်လျှောက်နေရတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အဲ့လို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မလျှောက်ဖူးခဲ့တော့ ကိုယ်တွေက လျှောက်ရတာ ဟာတာတာကြီး။
ဈေးသည်တွေ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းလေးကမှ တိုးဟှယ်ခွေ့ဟှယ်နဲ့ ဖိနပ်ကလေးတွေ တက်နင်းလိုက် ခါးပိုက်နှိုက်လေး ခံလိုက်နဲ့ လျှောက်ရတာ ဖီးလ်။
အခုတော့ Dအစိုးရ လုပ်လိုက်လို့ မြို့ထဲ ပလက်ဖောင်းတွေ အတော် ရှင်းသွားပြီ။ ကားလမ်းပေါ် လူတွေ ဆင်းမလျှောက်ရတော့ ကားတွေလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းကြီး သွားလာနေရရော။
ကားမောင်းရင် ခါးပါတ် မပတ်တဲ့သူတွေကို အရေးယူတယ်။ ကိုယ့်ကား ကိုယ်မောင်းတာ ကိုယ့်ဘာသာ ခါးပတ် မပတ်ချင်လို့ မပတ်တာ ဘယ်သူ့ အပူပါတုန်း။
ကိုယ်မပတ်လို့ တိုက်မိခိုက်မိရင် သေရင် ကိုယ်တွေပဲ သေကြတာ။
Dအစိုးရက ဘာတွေ ကြားချောင် စိုးရိမ်ပြီး ခါးပါတ် အတင်းပတ်ခိုင်းနေတယ်မသိ။
ကားဘီးလှိမ့်ပြီဆိုတာနဲ့ ပါတ်ကိုပတ်သင့်လို့ ခါးပတ်ဆိုတာကြီးကို ကားစက်ရုံက ထည့် ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တွေက မသိယောင် ဆောင်ထားပြီးသား။ မောင်းရင် ပါတ်ကို မပါတ်တာ။ သေသေကြေကြေပဲ။ ကိုယ်တွေက အဲ့လို သောင်ကျိုးနည်း သတိ္တတွေနဲ့ နေသားတကျ ကြီးပြင်းလာတာ။
အခုမှ လာပြီး ဒဏ်ရိုက်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့။
တင်းကြပ်တယ်ကွ။ နောက်ဆို ခါးပါတ် မပါတ်မနေရ စည်းကမ်းကို ကြောက်နေရတော့မယ်။ ကိုယ်တွေ အန္တရာယ် ကင်းတော့မယ်။ မလိုပါဘူး ဒါတွေ။
ဘာတွေ လျှာရှည်နေမှန်းကို မသိဘူး။
အခုလည်း ဘတ်စ်ကားတွေကို ရှင်းဖို့ ကြိုးစားပြန်ပြီ။
ကိုယ်တွေက မိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်းတဲ့ မထသနဲ့ နေသားကျနေပြီ။
ဘာဖြစ်လဲ. . .
သူတို့ ရိုင်းသလောက် ပြန်မရိုင်းချင်တဲ့သူကျတော့လည်း ဘတ်စ်တွေ ရိုင်းတာလေး တစ်ဖက်သတ် ခံရုံပေါ့။
ရုံးတက် ဆင်းချိန်ဆို ခြေထောက် ချစရာ နေရာမရှိ။
တိုးစမ်းပါ တိုးစမ်းပါ အထဲကို တိုးစီးကြပါဟဆိုပြီး အတင်း တိုးစီးခိုင်းတော့ လူ အသားချင်း ထိကပ်ပြီး စီးရတယ်။
တချို့ တဏှာရူးတွေကလည်း မိန်းကလေးတွေကို ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ခွင့်ရတယ်။ တချို့ ခါးပိုက်နှိုက်တွေဆိုလည်း ဝင်ငွေဖြောင့်တယ်။ ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်သလဲ။
မထသက ကိုယ်ရကိုယ်ယူ စနစ်ဆိုတော့ အချိန်ပြည့် လူအပြည့်အသိပ် တင်ချင်နေတာလေ။ စီးတဲ့လူ နည်းနေ ချောင်နေတယ်ဆိုရင်ကို . . .
မထသက မကြိုက်တာ။ ပြည့်ကျပ်နေမှ ပိုက်ဆံပိုရတာကိုး။
ချောင်ချိနေရင် မှတ်တိုင်မှာ အကြာကြီးရပ်မယ်။ လာထား။ တမေ့တမော လူစောင့်မယ်။ ခရီးသည်တွေလည်း နားနားနေနေ စီးရတာပေါ့။
အပြိုင်အဆိုင်တွေ့ရင် ယာဉ်စည်းကမ်းတွေ လမ်းစည်းကမ်းတွေ လာမပြောနဲ့။ ဂျောင်း။
စီးစမ်း အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီး။
ဖက်မပါရင် ကိုယ့်ထမီ ကိုယ့်ပုဆိုး ချွတ် ထုတ်။ မထသ က ကြည့်နေလိုက်အုန်းမှာ… ဘာမှတ်နေတုန်း… မထသ။
သောက်ခရီးသည်တွေ နင်တို့အသက် ဖက်နဲ့ထုတ်ချင်ထုတ် မထုတ်ချင်နေ ငါတို့ မောင်းချင်သလိုမောင်းမယ်။
ကားဖိုက်လာလို့ပါ တစ်စီးလောက်ပါ ကျွီ !!!! ဝေါ!!!! ပွမ်ပွမ်!!!! ရှေ့က တက်စီ သေချင်လို့လား ဖယ်စမ်း။ မထသ တဲ့ကွ…..
ကားခ ပေးစမ်း။ တောင်းချင်သလောက်တောင်းမယ်။
ပြန်မပြောနဲ့ ပါးပိတ်ချမယ် !
ခရီးသည်တွေနော် ပြောပြန်ရင်လည်း စပယ်ယာအပေါက်ဆိုးတယ် ဖြစ်အုန်းမယ်။ ဟိုတလောက ကြက်ဘဲဈေးနားမှာ မထသ စီးတဲ့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ဘာဖြစ်သွားလဲ နမူနာယူကြ။ဟမ်းးး ဘာမှတ်နေလဲ!
ကား လူမရလို့ အကြာကြီး စောင့်ပြီး တင်တယ်။ ဘာဖြစ်တုန်း။ မထသတဲ့ကွ။
ပွစိပွစိ လာပြောတော့. . . အဲ့ညီအစ်ကိုကို ဝိုင်းရိုက်ပလိုက်တယ်။ သေရော တစ်ယောက်။
ညဘက် . . .လာထားးး ငါးပိသိပ်ငါးချဉ်သိပ်။
ပေးစမ်း ပုံမှန် ၂၀ဝ ခရီးကို ၅၀၀။ မကျေနပ်ရင် တိုင်ချင်ရာတိုင် သောက်ဂုမစိုက်ဘူး။ မထသတဲ့ကွ။
အဲ့လို အင်မတန် သတ္တိပြောင်မြောက်တဲ့ မထသ!
အင်မတန် ကိုယ့်လိုဘအတွက် ငွေရှာကောင်းတဲ့မထသ !
အင်မတန် ထင်တိုင်းကြဲ! မောင်းရဲ! မိုက်ရဲ! တိုက်ရဲခိုက်ရဲ! ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းရဲတဲ့ မထသကို ဖျက်တယ်။ ဆိုးသွမ်းလွမ်းလို့ လူမိုက်တွေက ပြန်ပြီး မီးနဲ့ရှို့ ဆုံးမ ယူရတဲ့ (ဦးပိုင်ရဲ့စီးပွါးရေးဖြစ်တဲ့) ပါရမီတို့ အဓိပတိတို့ကို တုတ်နဲ့ထိုးတယ်။
YBS ကြီးနဲ့ အစားထိုးတယ်။
YBS ကြီး စီးရတာ ပျင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။
နောက်ဆို အခုထက် ပိုပြီး ကားတွေ ချောင်လာအုန်းတော့မယ်။ ပျင်းစရာကြီး။
ကတ်စနစ်တွေ ဘာတွေနဲ့ဆို ကားခ ပိုပေးရတာတွေ ဘာတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒါလည်း မကောင်းဘူး။
မထထတုန်းကဆို သူတို့ တောင်းသလောက် ပေးပစ်လိုက်ကြတာ။
တစ်သက်လုံး စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံလာတဲ့ ပြည်သူတွေကွ။ ဒီလောက် ကားခပိုတောင်းပြီး နှိပ်စက်တာလောက်ကို မမှုတာ။ မဖြုံတာ။ ပေးစမ်း! ဆို ရော့ ယူစမ်း! ပဲ။ မှတ်ထား။
“မသာတွေ ကာလနာ ဘတ်စ်ကားတွေ မျို ဆို့ အပင်းဆို့ဟဲ့”လို့ ကျိန်ဆဲနေပေမဲ့ ကိုယ်တွေက ပိုပေးပစ်လိုက်တာလေ။ ကုသိုလ်တောင် ရသေး။
နောက်ဆို ကတ်စနစ်ဖြစ်သွားရင် ကားခ ပိုပေးချင်ရင်တောင် ပိုပေးလို့ မရတော့ဘူး။ ကုသိုလ်လည်း မရတော့ဘူး။ မကျိန်ရ မဆဲရတော့ဘူးဆိုရင် ပျင်းစရာကြီး။
ကိုယ်တွေက သူရိုင်း ကိုယ်ရိုင်း ထင်တိုင်းကြဲပြီး မထသကို စီးလာတာ အသားကျနေပြီ။
အဲ့ဒါကို ဒီအစိုးရက ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတယ်မသိဘူး။
ပြည်သူတွေ ပေးတဲ့ အခွန်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာအဖြစ် သုံးတာမှာ အစိုးရအဖွဲ့က မခိုး မဝှက်ဘူး။
သူတို့ကို ကြည့်တာ ပျင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ တနေ့တနေ့ အလုပ်နဲ့လက်မပြတ်ဘဲ လုပ်လိုက်ကြတာ လုပ်လိုက်ကြတာ။
အိုကြီးအိုမ အသက် ၇ဝကျော် အဖွားကြီးကလည်း သွားလိုက် လာလိုက် တွေ့လိုက် ဆုံလိုက် ပြောလိုက် ဆိုလိုက်နဲ့ တချက် မနားဘူး။
အိပ်နေပါတော့လား! စားနေပါတော့လား !
သိက္ခာမဲ့တာလေးတွေ ရွေး လုပ်ပါတော့လား!
တိုင်းသူပြည်သာမျက်နှာကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ တက်နင်းကြပါတော့လား!
အရင်ကဆို ကိုယ်တွေက ကြုံနေရတာ
”သိန်း၁ထောင်တန် လမ်း ခင်းပေးမဟဲ့”လို့ ဘက်ဂျက်တောင်းပြီး နှစ်ပြားမတန်တဲ့လမ်းကို ခင်းပေးသလိုမျိုး လုပ်ကြတာတွေ။
အခုတော့ အပို ဘာမှ မသုံးဘူး။
ရိုးသားပြနေလိုက်တာ။ ကြည့်ရတာ ပုံမှန်နဲ့မတူဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေနဲ့မတူပဲ ဆန်းနေတယ်။
ကိုယ်တွေက သူခိုး ဂျပိုးနဲ့ အလိမ်အကောက်တွေနဲ့ချည်း နှစ်ခြောက်ဆယ်လောက် အသားကျလာတာကွ။
ဒါမျိုးကြီး လာရိုးသားပြနေတော့ သရိုးသရီနဲ့။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ (ဘာမှန်း သိရင်တောင်) မတောင်းဆိုရဲခဲ့သမျှ အခုလို အသားကျနေတာကြီးကို ဖျက်လိုဖျက်စီး လာလုပ်ပေးနေတယ်။
ကိုယ်တွေက နဂိုကတည်းက မြောင်းပုပ်ထဲမှာ အပုပ်နံ့နဲ့ အသားကျနေပြီဟာကို. . .
ရေတွင်း တူးပေးမယ်ဆိုလည်း. . .
”ငါ. . .ရေကြည် သောက်ချင်တယ်”
ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည် မသောက်ရလို့ကတော့ ပြောပစ်လိုက်မယ် တစ်ခွန်းတည်း. . .
အနာဟောင်းလေး… ကျက် မကျက်… ပြန် ကြည့်ကြပါအုန်း… ။
-ရေး/ ဆို- ဆောင်းဦးလှိုင်
အခုတလော ကျနော်ဖြင့် ပြောချင်တာတွေ တအားကို များနေတော့တာပဲ ဆရာစစ်ရေ။
အမြန်လမ်းကို လာပြီး အရင်တခါလို ဆိုင်ကလေးမှာ အေးအေးလူလူပေါ့။ ဆရာစစ်နဲ့ စကားတွေ ပြောချင်နေသေးတယ်။ ညီရင်းအစ်ကိုတွေထက်တောင် ပြောလို့ ကောင်းသေးတော့. . . .
ကျနော် တအား ပြောချင်နေတယ်။
ခက်တာက နားထောင်ပေးမယ့်သူ မရှိဘူး။
ကျနော့်လိုပဲ ပြောချင်တဲ့သူက များနေတယ်။
ကျနော့်စာကို ဝင်ဖတ်သွားတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း သိထားပေးပါနော်